Ahoana ny fametrahana Zimbra Collaboration Server amin'ny Ubuntu | Ubunlog
Zimbra Izany dia suite loharano misokatra fanatitra fitaovana famokarana tena mahaliana sy matanjaka, atambatra amina vokatra tena feno sy tsotra ampiasaina. Miorina amin'ny maromaro tetikasa loharano misokatra como el MySQL, Postfix, OpenLDAP, Lucene, nginx sy ny hafa, ary misy rindrambaiko manana fananana maromaro, izay ahafahanay manonona mpanjifa mailaka miorina amin'ny Ajax, fitaovana antivirus sy antispam, ary tontonana miasa miaraka izay manome antsika ny fahafaha-manao miasa mangarahara avy amin'ny fitaovana rehetra (afaka, ohatra, manomboka manao azy amin'ny takelaka ary mifamadika amin'ny solosaina finday sns).
Noho ny zava-misy fa avy loharanom-baovao misokatra, ary ankoatry ny fahalalahany ary ny fametrahana sy fikojakojana tsotra dia be mpampiasa amin'ny karazana tontolo iainana, manomboka amin'ny fanabeazana (sekoly, oniversite, akademia) ka hatrany amin'ny orinasa, ary mazava ho azy fa azontsika ampiharina amin'ny karazana tetikasa rehetra koa izy io. ka ho hitantsika eo ny fomba fametrahana Zimbra Collaboration Server amin'ny Ubuntu Server.
Mila solosaina tsotra fotsiny isika izay manana ny mpifanitsy amin'ny Canonical distro (14.10 na 15.04) napetraka, 25 GB habaka kapila ary farafahakeliny 4 GB RAM, ary mandritra ny sisa amin'ny lesona dia heverinay fa ny Ny adiresy IP an'ny mpizara anay dia 192.168.1.100 ary ny domain dia "server.local". Noho izany dia manomboka amin'ny fametrahana fonosana tena ilaina izahay ho an'ny tanjontsika:
# apt-mahazo mametraka libgmp10 libperl5.18 esory pax sysstat sqlite3 dnsmasq wget
Ankehitriny dia manamboatra dnsmasq izahay ka ny nameserver dia mail.server.local:
# nano / sns / anarana fampiantranoana
Ampianay ny lahatsoratra:
Toy izany koa no ataontsika amin'ny fisie / etc / host:
# nano / sns / mpampiantrano
Ampianay izao manaraka izao:
192.168.1.100 mail.server.local mail
Avy eo tonga ny fotoana hanovana ny fisie dnsmasq fikirakirana:
Avelantsika ireto saha manaraka ireto asehontsika eto:
mpizara = 192.168.1.100
fihainoana-adiresy = 127.0.0.1
Mamonjy sy mamerina mamerina ny fitaovana izahay:
Ity manaraka ity dia ny fampidinana ny Zimbra Collaboration Server, izay ampiasainay ny fitaovana wget, ary avy eo dia alainay mankany amin'ny lahatahiry eo an-toerana izany ary ampandehinay ny mpampiditra:
Io dia manamarina ireo fepetra takiana fototra, na ny hardware na ny rindrambaiko (tranomboky sy ny hafa) ary avy eo manontany antsika raha toa ka manaiky ny lisansa izahay, izay tokony hanaovanay fanekena hanohizana. Avy eo, aseho antsika ny fonosana fametrahana ary tokony hifanaraka amin'ny tranga rehetra isika (miditra amin'ny 'Y') afa-tsy amin'ny tranga zimbra-dnscache satria efa nampiasainay dnsmqasq. Avelantsika hametraka ny zava-drehetra ary avy eo rehefa aseho anay ny menio fikirakirana lehibe.
Tsy maintsy amboary ny fivarotana zimbra, izay ampidirintsika ny isa eo ankavanana (6) ary avy eo ny safidy 4 izay mamela antsika hametraka ny teny miafina. Raha vao tafiditra ao isika dia tsindrio ny 'a' mba hitehirizana ireo fanovana, ary manomboka izao rehefa te hanamarina ny satan'ny fametrahana azy izahay dia afaka miditra ao amin'ilay baiko 'zmcontrol status', izay hanondro ny serivisy Zimbra izay tanterahina . Tsy mila manandrana fotsiny isika izao ampidiro ny tontonana fitantanan'i Zimbra avy amin'ny tranokalanay, izay anoratanay '192.168.1.100: 7071' ao amin'ny bara adiresy, ary miditra miaraka amin'ny 'admin' mpampiasa izahay (tsy misy teny nalaina, mazava ho azy) ary ny teny miafina izay ampiasainay no noforoninay.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: ubunlog » Ubuntu » Ahoana ny fametrahana Zimbra Collaboration Server amin'ny Ubuntu
Salama, nanaraka ny fomba hametrahana zimbra aho ary manontany ahy hatrany ny fiankinan-doha fa tsy milaza amiko hoe iza no tsy hita, misy hafa ankoatra ireo voatanisa ao amin'ilay lahatsoratra.